Mar dambe ma eegi doono Netflix haddii aanan ka eegin barnaamijkan cusub ee weyn - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » madadaalo Marna kama eegi karo Netflix mar dambe haddii aanan ka eegin barnaamijkan cusub ee qabow - BGR
Waad ogtahay sida halku dhigga HBO uu yahay "Maahan TV, waa HBO"? Hadalkani ma ahaa hal-ku-dheel sanado badan, waxay ahayd run. Bandhigyada HBO waxay ahaayeen kuwo gaar ah, oo bixiya qoraal aan la koobi karin iyo wax soo saar. Si kastaba ha noqotee, maalmahan, HBO ma aha waxa ay ahayd. Shabakadda ayaa wali soo saarta warbaahinno la yaab leh, laakiin shabakado kale ayaa horumariyey ciyaartooygooda waxaadna hadda ka heli kartaa barnaamij "HBO-tayo" barnaamijyo ka imanaya ugu yaraan dhowr iyo toban istuudiyaha kala duwan. Kuwaas waxaa ka mid ah dabcan Netflix, qaarna waxay dhihi karaan in Netflix ay siyaabo dhowr ah uga adkaatay HBO. Shalay uun, qof saaxiib ah ayaa i weydiiyay waxa aan dooran lahaa haddii ay tahay inaan joojiyo rukhsaddayda Netflix ama ka-qaybgalka HBO. Muddo aan ka badneyn 5 sano kahor, waligey maan baajin karin HBO. Maanta, si kastaba ha noqotee, waxaan dooran lahaa inaan Netflix ku hayno HBO isla markaaba. Waxaad helaysaa barnaamijyo asal ah oo u dhigma HBO marka loo eego tayada, iyo sidoo kale maktabad ballaaran oo ka kooban qayb saddexaad oo ay ku jiraan wax cusub oo lagu darayo wakhti kasta. Tani waa iska cadahay sababta HBO Max loo qorsheeyay, laakiin waa sheeko ka duwan.
Uma maleynayo inaan kali ku ahay fikirka ah in Netflix ay tahay hadda adeegga keliya ee qulqulka la'aanteed taas oo aanan dooneynin inaan naftayda kaxeysto. Taasi micnaheedu maahan in Netflix uu qumman yahay. Mar alla markii aad dooratid barnaamij, filim ama barnaamij gaar ah oo aad bilowdo baahinta, waxaad ku jirtaa meesha saxda ah. Si kastaba ha noqotee, jidka ku yaal bogga Netflix waa mid dadku aad u buuq badan yihiin oo adeegsadayaashu aad ayey uga xanaaqsan yihiin furitaan kasta. Nasiib wanaag, waxaan helay codsi cusub oo si dhakhso leh u noqday habka aan ugu jeclahay in lagu qulquli karo Netflix maxaa yeelay waxay xallisaa dhammaan arrimaha ugu dhibka badan ee la xidhiidha qulqulka socodka adeegga.
Haddii aad Netflix ka daawatid Mac, Guji si aad u hesho Netflix shaybaarada dbk waa kuwa ugu fiican ee 5 $ ee aad waligaa qarash garowday. Barnaamijkan cajiibka ah ee cajiibka ah ayaa ah mid muhiim u ah shabakadda Netflix, laakiin wuxuu sifeeyaa dhammaan macluumaadka aan loo baahnayn ee aad neceb tahay isla markaana ka tagto oo keliya waxyaabaha weyn ee aad rabto inaad daadiso.
Barnaamijkan cusub ee weyn ee Netflix wuxuu ka kooban yahay muuqaalo, laakiin waa kuwa aan aad u jeclahay.
Marka horeba, Riix bogga Netflix waxaa ka mid ah qayb ka mid ah dhibaatada Netflix ee dadku aad u neceb yihiin. Taasi waa sax, waxaan ka hadlayaa gawaarida gawaarida iswada. Ma jiraan wax ka xun wixii ka soo kordha bilaabista Netflix oo isla markaaba lagu weeraro trailer filimka asalka ah ama barnaamijka kaas oo Netflix ay horumarineyso waqtigaas. Kadib waxaad hoos ugu riixaysaa liiska si aad uga joojiso inuu ciyaaro iyo maxaa socda? Taasi waa sax ... trailer kale ayaa bilaabaya inuu si toos ah u ciyaaro. Oo maxaa dhacaya markaad u rogto wax aan duub lahayn? Yup ... wuxuu hadda bilaabay inuu ku ciyaaro goob madal ah showga ama filimka loop. uf .
Gujiye u shaqeeya Netflix wuxuu ku joojinayaa nambarka hal sanduuq oo aad ku hubin karto shaashadda xulashada. Waxa kale oo aad ku joojin kartaa saamaynta dhaqdhaqaaqa ku dhajin kara boodhadhka, si otomaatig ah u illoobi intros, si otomatik ah ugu badalan qeybta xiga ee showga dhamaadka qeyb kasta, iyo inbadan. Xaqiiqda ah inaad wax walba ka xakameyn karto taabashada taabashada haddii aad isticmaasho MacBook Pro waxay sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad muujiso fiidiyowga oo aad u bedesho qaabka muuqaalka sawirka haddii aad rabto inaad isku daydo inaad shaqeyso inta aad shaqeyneyso. Raac show aad jeceshahay.
Waa codsi weyn oo gebi ahaanba beddelaya qaabka aad u eegto Netflix. Waxay ku kacdaa ugu badnaantii koob qaxwaha chic ka ah Starbucks. Hubi dhab ahaan.